5-nin oo hubeysan oo dhac u geystay iskuul ku yaalla Muqdisho ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka 5-nin oo hubeysan oo dhac u geystay iskuul ku yaalla Muqdisho
5-nin oo hubeysan oo dhac u geystay iskuul ku yaalla Muqdisho
Dabley hubeysaneyd oo ka koobneyd ilaa shan nin ayaa gudaha u galay iskuul ku yaalla degmada Dharkeynleey e gobalka Banaadir, iyagoona dhac xoogan u geystay Iskuulkaasi, sida uu xaqiijiyay maamulka iskuulaasi oo warbaahinta la hadlay.
Iskuulka la dhacay ayaa lagu magaacaabaa ‘Banaadir’ waxaana xalay saqdii dhexe xoog ku galay shan nin oo hubeysnaa, kuwaa oo qaatay dhamaan qalabkii iskuulka yaalay oo intiisa badan ahaa Computerro.
Ragga iskuulka dhacay ayaa watay labo qori oo AK47 ah iyo bostoolado waxayne dhac xoog leh u geysteen iskuulkaasi, sida uu sheegay maamulaha.
C/llaahi Sheekh C/raxmaan waa maamulaha Iskuulka la dhacay, wuxuuna sheegay in ay raggaan hubeysan gudaha u galeen iskuulka islamar ahaantaane ay xirxireen waardiyihii joogay iskuulka, kadibne ay uruursadeen wixii Computer ahaa.
Wuxuuna maamuluhu sheegay in Computerada la qaatay aya ahaayeen kuwo muhiim ah ayne ku jirtay xogtii ardeyda ee la diwaan geliyay mudo 10-sano dhan, taasi ay adagtahay si lagu helo.
“Nimanka Iskuulka Dhacay waxay ahaayeen shan nin oo watay 2-qori oo AK47 ah iyo bostoolado waxayne qaateen dhamaan Computeradii yaalay Iskuulka oo ay ku jirtay xogtii ardayda ee mudo 10 ah la diwaan geliyay, waardiyii iskuulka joogay wey xir xireen sidaas ay ku qaateen dhamaan qalabkii”. Ayuu yiri maamulaha Iskuulkaasi.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan dabley hubeysan oo tuugo ah waxayne marar badan sidaan oo kale u dhaceen xarumo waxbarasho iyo goobaha kale ee ganacsiga, iyagoona dhacyo badan ka geystay gudaha Caasimadda Soomaaliya.
Previous articleCiidamo Mareykan iyo Somali ah & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Janaale
Next articleHalkee ayuu ku dambeeyay abaabulkii ciidan ee Axmed Madoobe ???